Massimiliano Allegri oo weyn doona adeega xidig muhiim ah kulanka soo aadan Manchester United ee tartanka Champions League – Gool FM
Massimiliano Allegri oo weyn doona adeega xidig muhiim ah kulanka soo aadan Manchester United ee tartanka Champions League
(Juventus) 22 Okt 2018. Kooxda Juventus ayaa waxay ku dhawaaqday in uu dhaawac soo gaaray ciyaaryahankeeda khadka dhexe reer Germany ee Emre Can, isla markaana uu garoomada ka maqnaaanayo maalmo yar.
Juventus ayaa isku diyaarineysa kulanka adag ay habeen dambe ee Talaadada kula ciyaari doonto kooxda Manchester United tartanka Champions League.
Wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in tababare Massimiliano Allegri uu waayi doono adeega Emre Can, kadib markii uu soo gaaray dhaawac dhanka qanjirada ah.
Emre Can ayaa mari doono xiliyada soo aadan baaritaano caafimaad, si loo ogaada heerka uu gaarsiisan yahay xaalada dhaawaca uu qabo, waxaana suuragal ah in uu qaliin maro.
Si kastaba wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ayaa wuxuu xaqiijiyay in ugu yaraan Emre Can uu seegi doono kulanka adag ay habeen dambe ee Talaadada kula ciyaari doonaan kooxda Manchester United tartanka Champions League.
Jamaahiirta Real Madrid oo cadeyn ay bixiyeen lagu ogaaday fikirkooda kaga aadan tababare Lopetegu kahor kulanka El Clasico
Marcelo oo si cad ugu sheegay Real Madrid inuu ka tagayo kooxda suuqa Janaayo